के हो अल्जाइमर्स ? कसरी जोगिने ? – Dullu Khabar
५ आश्विन २०७८, मंगलवार ०९:३६
काठमाण्डाै । आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस ‘विस्मृतिलाई चिनौँ, अल्जाइमर्सलाई जानौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
अल्जाइमर्स स्नायु प्रणालीमा हुने गम्भीर प्रकारको रोग हो । यसलाई बिर्सिने रोग समेत भनेर चिनिन्छ । यो रोगबाट संसारभरका लाखौँ मानिस पीडित छन् ।
यो रोग लागे पछि बिस्तारै बिस्तारै मस्तिष्कका कोषहरु मर्दै जान्छन् । जसका कारण बिस्तारै बिर्सने, भुल्ने, नचिन्ने हुन्छ । यो रोगले बढ्दै जाने र लामो समयसम्म लागिरहने तथा अन्तमा अत्यन्त कठोर भएर बिरामीलाई सिकिस्त बनाइदिन्छ।
६५ वर्ष माथिका मानिसमा यो रोगको सम्भावना बढी हुन्छ । अल्जाइमर्स सम्बन्धी एक अध्ययन अनुसार विश्वमा हरेक ३ सेकेण्डमा १ जनालाई यो रोग लागेको हुन्छ । मृत्युको कारणहरू मध्ये यो रोग सातौँ कारण हो ।
पछिल्लो समय यो रोग लाग्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले अल्जाइमर्स हुनेको सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा झण्डै १५ करोड २० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रोग लाग्न नदिन सन्तुलित खानपान, स्वास्थ्य परीक्षण, योग, ध्यान, व्यायाम र मनोपरामर्शमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
भिटामिन ‘बी’ नियमित सेवन गरे, डिप्रेसन, मानसिक तनाव, निन्द्राको समस्या समाधान गरे, लागू औषधको प्रयोग र जाँड रक्सी खान छोडे यो रोग लाग्ने जोखिम कम हुन्छ । सरकारले यो रोगबाट पीडित भएकाहरुलाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ ।
यस्तै, संशोधित नीति तथा कार्यक्रममा औषधि उपचारका लागि थप मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सहायता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सन् १९९४ देखि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २१ तारिखदेखि विश्व अल्जाइमर्स दिवस मनाउन सुरु भएको हो ।
के हो अल्जाइमर्स ?
अल्जाइमर्स मानसिक क्षमतामा ह्रास भएर व्यक्तिको स्मरण शक्ति, चिन्तन, वरिपरि भइरहेका गतिविधिहरू प्रतिको जागरूकता, हिसाब किताब, नयाँ कुरा सिक्ने क्षमता, विचार तथा स्वविवेकको साथै संवेग, व्यवहार तथा आत्मा उत्साह कमी हुँदै जाने रोग हो ।
यो रोगले बढ्दै जाने र लामो समयसम्म लागिरहने तथा अन्तमा अत्यन्त कठोर भएर बिरामीलाई सिकिस्त बनाइदिन्छ । ६५ वर्षमाथिका मानिसमा यो रोगको सम्भावना बढी हुन्छ ।
– स्मरण शक्तिको ह्रास आउने, दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ, खास गरी भर्खरैको घटनाहरु र व्यक्तिका नामहरू समेत बिर्सने ।
–तर्क गर्ने क्षमता हराउनु र सामान्य समस्याहरू पनि समाधान गर्न नसक्नु ।
– सामान्य काम गर्न पनि असमर्थ हुनु ।
– समय तथा स्थानको ज्ञान हराउँदै जानु।
– आँखाले देखेका कुराहरू नचिन्नु ।
–टाढाको दूरी अथवा सम्बन्ध छुट्याउन नसक्नु ।
–कुराकानी गर्दा अथवा लेख्ने बेलामा चाहिएको शब्द नभेट्नु ।
– सामानहरू कता राखे भन्ने बिर्सनु ।
– स्वविवेक शक्ति क्षीण हुनु अथवा गुम्नु ।
– घरायसी तथा व्यावसायिक क्रियाकलापबाट विमुख हुनु ।
– व्यक्तिको मुड तथा व्यक्तित्वमा परिवर्तन हुनु ।
भिटामिन ‘बी’ नियमित सेवन गरे रोगबाट बच्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । डिप्रेसन, मानसिक तनाव, निन्द्राको समस्या, लागुऔषधिको प्रयोग र धेरै जाँड रक्सी पिउनेलगायतका कारण यो रोग लाग्ने खतरा हुन्छ । यस्ता कुलत समयमै छोड्नु पर्छ ।
यस्तै समयमै उच्च रक्तचापको उपचार, शरीरको तौल नियन्त्रण, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नु यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । खानपिनमा विशेष ध्यान दिने । पोषण तत्त्वहरूको कमी हुन नदिनु यो रोगबाट बच्ने उपाय हुन् । (उज्यालाेबाट)